Dilka dadka kasoo jeeda Baydhaba oo ka bilaawday Galmudug “Afar meyd oo gowr dhaw la gaarsiiyay dhuusamareeb”.
June 12, 2019 Xafiiska Puntland Somalia, Wararka Maanta 9
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug waxaa gowr dhaw lagaarsiiyay meydka afar ruux oo dhalasho ahaan kasoo jeeday deegaanada KGS.
Afartaan ruux ayaa lagu dilay deegaan kudhaw magaaladaasi wallow warar kala duwan ay kasoo baxayaan dilkooda.
Dilkooda ayaa imaanaya xilli saacadihii lasoo dhaafay lasoo warinayay hadalo aan fcneyn.
Dilka ayaa kadhacay Deegaan lagu magacaabo Dhiin Warisa, iyadoona dad deegaanka ah ay Marqaannews u sheegeen in maleeshiyada Dilka Geeysatay ay Ku Qaldeen Beel Ama Qabiil Dagaal Kala dhaxeeyay dadkaan ay dileen.
Habarkintir ba geysatay
ASCWW, Walaalayaal waxaan ahay akhriste jooga Guriceel, Dadka hadda la baxay Koofur-Galbeed iyo Kuwa la baxay Galmudug oo labaduba ah Soomaali waxay weligood kuwadanoolaayeen “Nabad” Degmada Guriceel oo ah xarunta ganacsiga ee Galgaduud waxaa ku yaalla suuq caan ah oo la-yiraahdo “Suuq-Eelaay” laguna iibiyo Bagaashka iyo dharka ayna ka mid yihiin ganacsato caan ah oo Digil iyo Mirif ah, Deegaanka waxaa xakuma Culumada Ahlu-Sunah-Wal-Jamaaca, waxay deegaanka ka tarxiileen culumadii Wahaabiyada oo dhan ( Al-ictisaam, Al-itixaad, Salafiyah Qadiim, Salafiyah Jadiid, Takfiir iyo Saaciduun-bil Xaq) waxaa laxiray dugsiyadoodii Quraanka, Masaajid waaweeyn oo ay dhiseen wadamadda Khaliijka ayaa hadda dameeruhu ku hoydaan iyadoo culumaddii ku abtirsaneysay deegaankana qasab lagu tarxiilay. Hadaba waxaan aad uga xumahay in dad neceb isirka dadka reer Galmudug buun buuniyaan ama qalad u tarjumaan xaqiiqda dadka walaalaha ah ee waligood wada noolaa qeybsan jiray dhib iyo Dheef in La’iska hor keeno. Inagu Xaqdarro Deegaankeenna ka Dhacda dooni Meeyno, Guriceel Waxay ahyd Xero ciidan waqtigii dowladdii kacaanka guryaha iyo dhulalka ugu muhiimsan magaalada weli waxaa deggan qoysaskii iyo eheledii askartii iyo saraakiishii xilligaas welina jecel magaalada kuna ladan.
Baaritaan ay sameeyeen ASWJ waxay soo heleen Dad u fududeeyay naftii haligihii la qabtay safarka sahayda deegaanka damiinna ka ahaa shaqsigaas, dadkaas ayey maxkamaddu xabsigii ugu bedeshay in ay deegaanka isaga baxaan maadaama ay u xoogsadaan qoysas badan oo hadii ay xabsi galaan ay adkaaneeyso in ay xaq ka helaan maamulka. WAX HUBSADA NACEYBKA HAKU NAAR TAGINA.
1.Reer golahaan waan wada salaamay.Mudo waan ka maqnaa golaha oo waxaan aday umrah ama cimraha.Dadkii an ku soo arkay makka iyo madiinah kuma uu jirin Dab La Riday.
2.Waxaa soomaali ka mida dad an aqoon nafta dadku qeymiga ay leedahay.Dadkaasu ma kala yaqaaniin qof iyo Diqsi waxay ku kala duwan yahiin.Waa dad meel kalke looga yeerayo.
Dil looma baahna, waxase aan shaki ku jirin. dadka K.galbeed dhallinyaradoodu dhibaata badan ayey ka geystaa Gobollada kale ee ay tagaa, waana argagixisinimo, waa dad shabaab u nugul in ay ku shaqeystaan diin laawayaashaasi, hadaba dal bey noqoneysaain la yiraaho Gobolladiina jooga, mar hadii Dowlad ama odey wax u sheega ama shaqa u sameeya lahey, waa la iska celinayaa.
Qof bini aadam ah uu la dilowaa naga reebanyhay waxaase aan dareensanahay reer Galmudug inay Soomaaliya xasuuqii wligiis ka jiray inay iyagu mas’uul ka ahaayeen ila iyo hada dad iyo hantiddddddddda soomaaliya inay si ay gacanta ugu dhigaan inay waxba ka waabanayn,
Qoraaga waxaa iiga muuqda inuu cudur daar u samaynayo uu leyahay waa lagu qaldamay
Atariisho… maalahan umul bay ahayd way maqnayd.
Guriceel.. waxaa degan dad wanaagsan Habr gir , cayr.. soo dhawooow
Guri & ceel.. waa meel barwaaqo ah.
Ma munaafaqiin tii dadka isku diri jirtey baa ka dhex faa’iidaysanay